सेतो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो : कसरी शुरु भयो सेतो टीकाको चलन? - sambahak
Home धर्म सेतो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो : कसरी शुरु भयो सेतो टीकाको चलन?
त्यसैले म पनि ‘सेतो टीका’ लगाउने वर्गमा परेँ। सेतो टीका होस् या अन्य रंगको, विजया दशमीमा लगाउनेसबै टीकाहरुले दशैंको झल्को दिन्छ नै।
गुरुङ समूदायले विहान वायुको पूजा गरेपछि दिउँसो पुरोहितले पितृलाई निम्तो गर्ने र खाँड पूजा गर्ने बताए। राज्यले बिदाबोनसलगायतको सुविधा दिएर मनाउन लगाएको विषयलाई जनजातिले लादिएको भन्ने विषयलाई भने नकार्न नसकिने उनले बताए। भने, ‘लादिएको भन्ने कुरा राज्य व्यवस्थाले मान्नुपर्छ भनेर सुविधा दिएको छ। यसअर्थमा यो सही पनि छ।’पहिलोपोष्टको सहयोगमा
Previous articleधन सम्पन्नताका लागि मंगलबार यी कार्य गर्नुहोस्
Next articleअफगानिस्तानको विश्वविद्यालयमा बम विस्फोट, १९ विद्यार्थी घाइते
बिश्वभर कोरोनाले मान्छे मरिरहदा, यी १३ देशमा भने एक जनामा पनि कोरोना छैन
वडाध्यक्ष लामाले भारतको सीमामा लगाइदिए काँडेतार